တရုတ်နိုင်ငံမှကြွေထည်မြေထည်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ပန်းကန်များဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရေဖြည့်တင်းစက်၊ စုတ်ယူစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | ယူနန်
Yunfeng ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် - အားလုံးသောကြွေပြားများပွန်းပဲ့နိုင်သည့်ဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ ပွတ်တိုက်အားနိမ့်ခြင်း， အလွန်မြင့်မားသောမော်လီကျူးအလေးချိန် polyethylene ဖန်မျှင်အမျှင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပလပ်စတစ်အလွှာ၊ မြင့်မားသောသံမဏိပတ် ၀ န်းကျင်၊ Asingle slit၊ double seam, ၃ slits စသည်ဖြင့် ၃၆၀ ဒီဂရီတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ထိုင်ခုံသည်တပ်ဆင်မှုနေရာအမျိုးမျိုး၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းသည်။ Yunfeng ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် - သုံးစွဲသူ၏လိုအပ်ချက်များအရကျွန်ုပ်တို့တွင်အခန်းတစ်ခန်းတည်း၊
အားလုံးသောကြွေပြားများကောင်းမွန်သောပွန်းပဲ့မှုခံနိုင်မှု၊ နိမ့်သောပွတ်တိုက်အားကိန်း， အလွန်မြင့်မားသောမော်လီကျူးအလေးချိန်ပိုလီအီသလင်းဖန်ဖိုင်ဘာအားဖြည့်ပလတ်စတစ်အလွှာ၊ မြင့်မားသောသံမဏိအကာများ၊ Asingle အလျားလိုက်အပေါက်၊ နှစ်ထပ်ချုပ်ရိုး၊
ထိုင်ခုံ ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သည်။ နေရာချထားမှုအမျိုးမျိုးလိုအပ်သည်။
ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအရကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ်ခန်းတည်း၊ နှစ်ခန်းသုံးခန်းရှိသည်။ လေဟာနယ်အကွာအဝေး 10-33KPA ဖြစ်ပါသည်, ချုပ်ရိုးအကျယ် 13-20mm, box ကိုသံမဏိဖြင့်လုပ်။ , သေတ္တာညှိသဲ bisted ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မားသော wear ခံနိုင်ရည်နှင့်သက်တမ်းကြာရှည်ခံသောကြွေပြားများ
ပစ္စည်း (မျက်နှာပြင်အဖုံးများ) AL-OXIDE CERAMIC သို့မဟုတ် ZR-OXIDE CERAMIC သို့မဟုတ် SI-NITRIDE CERAMIC or HDPE
ပစ္စည်း (ရေဆိုးသေတ္တာများ) သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများ
ထူးခြားချက်များ (Surface Covers) ၁။ ကောင်းမွန်သောစက္ကူပုံစံ ၂ ။ လျှော့ထားသောစက္ကူနှစ်လုံးပါကောင်၃။ ကြွေထည်ပစ္စည်းသက်တမ်း
(၄) စက်အ ၀ တ်အထည်များအတွက်သက်တမ်းတိုးခြင်း (ဝါယာကြိုးများနှင့်စာနယ်ဇင်းများဖောင်တင်ခြင်း) ။
၅။ အပူချိန်ထိ ၆၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိခံနိုင်ရည်ရှိသည်
အင်္ဂါရပ်များ (ရေဆိုးသေတ္တာများ) 1. စက္ကူအဆင့်များနှင့်အမြန်နှုန်းအားလုံးအတွက်သင့်လျော်သည်။ အကောင်းဆုံးစာရွက်အရည်အသွေး3. ထိရောက်သောရေနုတ်မြောင်း
၁။ မြင့်မားသော ၀ တ်ဆင်ခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသောခံနိုင်ရည် 2. Perfect Erosive Resistance 3.High သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနှင့်သိပ်သည်းဆ ၄။ ခိုင်ခံ့သော Edge Toughness 5.Low Surface Porosity & Roughness ။
ရှေ့သို့ 1500-Mid Density Cleaner
ကြွေ Dewatering Element တွေကိုစုတ်ယူခြင်း Box ကိုအဖုံး
စက္ကူစက်ရုံအတွက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း Element ၏ကြွေ Fel စုတ်ယူခြင်း box ကိုအဖုံး
ကြွေစုတ်ယူခြင်း Box ကိုအဖုံး
စုတ်ယူခြင်း Box ကို
စက္ကူပြုလုပ်ရာတွင်သုံးသောစက်ပစ္စည်း Vacuum Suction Box အတွက် Uhmwpe ဘုတ်အဖွဲ့
စက္ကူစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လေဟာနယ်ကြွေစုတ်ယူခြင်း box ကို